Agasti 2021: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kwe-Free Software | Kusuka kuLinux
Agasti 2021: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala
Ngalolu suku lokugcina lwe- Agasti 2021, njengenjwayelo njalo ekupheleni kwenyanga ngayinye, sikulethela lokhu okuncane ukuhlanganiswa, kokunye kakhulu izincwadi ezifakiwe yaleso sikhathi.
1 Isifinyezo sika-Agasti 2021
1.1.4 Okuphezulu okungu-10: Okuthunyelwe Okunconyiwe kuka-Agasti 2021
1.2.1 Ukukhishwa kuka-Agasti 2021 GNU / Linux Distros Ngokuya nge-DistroWatch
Isifinyezo se- Agasti 2021
I-MX-21: Uhlobo lwe-MX Linux beta 1 luyatholakala - i-Flor Silvestre / i-Wildflower
I-Host Minder: Uhlelo lokusebenza oluwusizo nolulula ukuvimba izizinda ezingafuneki
I-Debian 11 iza ne-Linux 5.10, izibuyekezo zephakeji, ukuthuthuka nokuningi
Bathole uhlobo olusha lokuhlaselwa kwe-HTTP Cela Ukushushumbisa
Bathola ubungozi emitatsheni yolwazi yenethiwekhi yeRust and Go kuvimbela ukuqinisekiswa kwe-IP
Izinsongo ze-GNU / Linux nobungozi: Yazi Isitha Sakho!
Umlando we-FSF: Isigaba sewebhu esisha esinezinyathelo ezibaluleke kakhulu ze-FSF
I-Top 10: Okuthunyelwe Okunconyiwe kusuka ku- Agasti 2021
I-Axie Infinity: Umdlalo othakazelisayo we-inthanethi ovela ku-DeFi World osuselwa ku-NFT. (Bheka)
I-Glibc 2.34: Ifika ngokulungiswa kokungcupheka, izici ezintsha ze-Linux, nokuningi. (Bheka)
I-Freespire 7.7 iqhathaniswa ne-Linspire 10 Service Pack 1: Ngaphandle kweWindows. (Bheka)
Ububi obudingekayo? I-Apple ingathola izithombe zokuhlukunyezwa kwezingane kugalari yezithombe (Bheka)
I-WireGuard: Wenze izinto kahle futhi manje iza njengechweba leWindows Kernel. (Bheka)
Inhlolovo Yonjiniyela Bokuchichima Kwe-Stack: Ukuhlola imiphumela yonyaka. (Bheka)
I-TradingView DesktopUngalufaka kanjani lolu hlelo lokusebenza lwe-DeFi ku-GNU / Linux? (Bheka)
Ukuhlaselwa kwe-APT: Izinsongo Zokuqhubeka Ezithuthukile Zingayithinta I-Linux? (Bheka)
I-QEMU 6.1: Iza nokubethela kwehadiwele, ukusekelwa kwamabhodi amaningi, nokuningi. (Bheka)
I-Lightway: Iphrothokholi yomthombo ovulekile we-ExpressVPN. (Bheka)
Ukukhishwa kuka-Agasti 2021 GNU / Linux Distros Ngokuya nge-DistroWatch
I-Linux Lite 5.6: Usuku lwama-31
Zama i-iOS 2021.08.27: Usuku lwama-30
I-LibreELEC 10.0.0: Usuku lwama-29
Ubuntu 20.04.3: Usuku lwama-26
IClonezilla Bukhoma 2.7.3-19: Usuku lwama-26
I-Voyager Live 11: Usuku lwama-24
Uxolo 21.0: Usuku lwama-22
ISparkyLinux 6.0: Usuku lwama-20
IKaOS 2021.08: Usuku lwama-18
I-IPFire 2.27 Core 159: Usuku lwama-18
IManjaro Linux 21.1.0: Usuku lwama-18
I-Zorin OS 16: Usuku lwama-17
I-Slackware Linux 15.0 RC1: Usuku lwama-16
UDebian Edu 11.0.0: Usuku lwama-15
I-Debian 11: Usuku lwama-14
I-Elive 3.8.22 (Beta): Usuku lwama-12
Isisekelo se-OS 6.0: Usuku lwama-10
I-4MLinux 37.0: Usuku lwama-01
05-08-2021 - Isiphathimandla saseDashi siqinisa inkululeko yama-routers: IDutch Authority for Consumers and Markets (ACM) ishicilele imithetho emisha ezothuthukisa iRouter Freedom eNetherlands. Kungakapheli izinyanga eziyisithupha, ama-ISPs kuzofanele athobele futhi anikeze abathengi namabhizinisi ithuba lokuxhuma imodemu noma i-router abayithandayo. I-FSFE ibona lesi sinqumo njengokunqoba okukhulu kwamalungelo abathengi. Inkululeko yomzila yilungelo abathengi banoma yimuphi Umhlinzeki Wensizakalo Ye-Inthanethi (ISP) okufanele bakhethe futhi basebenzise imodemu eyimfihlo ne-router esikhundleni semishini enikezwa yi-ISP. (Bheka)
12-08-2021 - Umthombo Ovulekile Ulwazi Olusebenzayo - Uhlelo lomcimbi seluyatholakala!: NgoSepthemba 16, 2021, i-Open Source Initiative izosingatha umcimbi wamahhala wezinsuku ezingamahhafu ku-Practical Open Source Information. Ehloselwe abathuthukisi bemithombo evulekile, izifundiswa, abameli kanye nabaphathi abanentshisekelo yokufunda ngomthombo ovulekile osebenzayo, lo mcimbi oyingqayizivele uzofaka izikhulumi ezinolwazi oluningi emkhakheni - ngokugxila kubasebenzisi abasha nalabo abafuna ukujulisa ukubamba kwabo iqhaza. Emthonjeni ovulekile . (Bheka)
18-08-2021 - Ukunwetshwa kohlu lwezikhulumi ku-Open Networking Summit nase-Edge + Kubernetes nge-Edge Day kufaka phakathi izikhanyisi ezivela kulo mkhakhaIzipikha ezine ezengeziwe ezizokhulisa izovela isigaba sokuqala se-Open Networks Summit kanye ne-Edge + Kubernetes nge-Edge Day ukuze babelane ngobuchwepheshe babo ku-Automation ne-AI, i-5G namandla we-Open Ecosystems. (Bheka)
Ngamafuphi, siyethemba ukuthi lokhu "encane futhi ewusizo ukuhlanganiswa kwezindaba " ngamaphuzu avelele ngaphakathi nangaphandle kwebhulogi «DesdeLinux» ngenyanga ka «agosto» kusuka ngonyaka we-2021, ube wusizo kakhulu kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekuthuthukisweni, ekukhuleni nasekusakazweni kohlelo lokuphilayo lwezinhlelo zokusebenza ezitholakalayo «GNU/Linux».
Futhi uma uluthandile lolu shicilelo, qiniseka ukuthi wabelana ngalo nabanye kumawebhusayithi wakho owathandayo, iziteshi, amaqembu noma imiphakathi yokuxhumana nabantu noma amasistimu emiyalezo. Ekugcineni, vakashela ikhasi lethu lasekhaya ku- «KusukaLinux» ukuhlola ezinye izindaba, bese ujoyina isiteshi sethu esisemthethweni se- Yocingo kusuka ku-DesdeLinux.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Agasti 2021: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala
Isifinyezo sezindaba esihle kakhulu. Ngingasho uqobo ukuthi izindaba ezigqamile, ezibalulekile nezimnandi kube ukukhishwa kwe-Debian 11
Ngiyabingelela, Paul. Ngiyabonga ngokuphawula kwakho nangama-vibes amahle ngalokhu okuthunyelwe nokunye okufundile.
I-ONLYOFFICE DocServer 6.4 iza nezithuthukisi eziningana ku-suite
I-Wi-Fi 7 isondela futhi isondela futhi i-Intel isho ukuthi izobaluleka